NGIFUNA UKUYEKA - 802Quits
Ama-Vermonters NGIFUNA UKUYEKA
Lapho uyeka ukubhema okuhle, uthatha isinyathelo esisodwa esibaluleke kakhulu esiya ezinzuzweni ezinjengokuba nempilo, ukonga imali nokugcina umndeni wakho uphephile. Noma ngabe uyabhema, sebenzisa idiphu, noma usebenzisa osikilidi abasebenza ngogesi (abaziwa ngama-e-cigarettes noma ama-e-cigs), ungathola usizo oluningi noma oluncane lapha ngendlela ofuna ngayo. Ugwayi ulutha kakhulu, futhi kungathatha imizamo eminingi ukuze uyeke unomphela. Futhi konke ukuzama kubalwa!
Lawa mathuluzi wamahhala nezinhlelo zokusekela zikunikeza izinketho eziningi zokuyeka ukubhema noma olunye ugwayi ngendlela ekusebenzela ngayo. Izinhlelo ezingama-802Quits, ezinjengokuyeka i-inthanethi noma ukuyeka ngocingo (1-800-QHAQA-MANJE) zifaka phakathi izinhlelo zokuyeka ezenzelwe wena.
Yenza uhlelo lwakho lokuyeka>
Thola Usizo Lokuyeka>
Thola Umhlahlandlela Wakho Wokuyeka Ukumahhala
Noma ngabe uzame kaninginingi, noma lokhu kungukuzama kwakho kokuqala, unezizathu zakho zokufuna ukuyeka. Lo mhlahlandlela wamakhasi angama-44 uzokusiza igxathu negxathu ukwazi izimbangela zakho, ulungele izinselelo zakho, ulayini ukwesekwa, unqume ngemithi futhi uhlale uyeke. Uma uyiVermonter futhi ungathanda ukucela Umhlahlandlela Wokushiya, sicela uthumele i-imeyili tobaccovt@vermont.gov noma ulande Umhlahlandlela Wokuyeka i-Vermont (PDF).